डिसेम्बर 2014 – टेलर Lopes ツ ब्लग
महिना: डिसेम्बर 2014
क्लाउड केरा पी र OwnCloud संग होस्टिंग फाइलहरू [पूर्ण]
तपाईंको आफ्नै होस्टिंग क्लाउड फाइल सिर्जना (बादल) केरा पी प्रयोग (हार्डवेयर) र OwnCloud (सफ्टवेयर).
पढाइ जारी राख्न →
6 डिसेम्बर 2014 टेलर Lopes	अपाचे, केले अनुकरणीय, बादल, ddns, lubuntu, मिनी-पीसी, NTFS3जी, owncloud, phpmyAdmin, ऐंसेलु अनुकरणीय, sudoers, VNC, x11vnc	1 टिप्पणी
अर्को देशबाट प्रमुख संग Kaspersky सक्षम (क्षेत्र) यो समस्या हटाउन सम्भाव्य समाधान छ "सक्रियता कोड यस क्षेत्रका लागि अमान्य छ", पछि केही कुञ्जीहरू केवल केहि क्षेत्रका प्रयोग गर्न सकिन्छ कि एक प्रतिबन्ध छ (देशहरूमा). Problema Quem fe...
VirtualBox मा डिस्क आकार वृद्धि एक Windows देखि 10, एक virtualized उबुन्टु लिनक्स को डिस्क विस्तार कसरी (.वीडीआई) usando Oracle VM VirtualBox? हेर्नुहोस् कसरी2कदम! Problema Quando se tem um Sistema operacional virtualizado, यो तपाईको पछि डिस्क खाली स्थानबाट बाहिर चलाउन सामान्य छ।.
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 taylorlopes.com अक्टोबर देखि 2012, 2.770.728 पहुँच